Steel Structure, Steel Structure Design, Prefabricated House - Jikọọ
Nkuzi-Bara Uru Building
Light ígwè bi ụlọ
Steel Ọdịdị ụlọ
Nga ígwè Ọdịdị nkwakọba
Metal Steel Structure Building nkwakọba
Metal Steel Structure Building Onodi
Strong oru otu
The iso oru otu nwere ọtụtụ iri afọ nke ahụmahụ na ụlọ ọrụ, na ike oru na ọkachamara ahụmahụ. Anyị magburu onwe imewe àgwà na ụkpụrụ ekwe maka ihe e kere eke nke elu-edu, elu-arụmọrụ, ọgụgụ isi akụrụngwa.
Iso elu àgwà ngwaahịa, mmepụta ụkpụrụ, na ndị ahịa na ọrụ nwere nwetara ọnọdụ anyị dị ka ụlọ ọrụ ndú. Iji hụ na a ọkọlọtọ-aga n'ihu na-zutere, alaka ụlọ ọrụ na ndị nkesa e putara ighe na-elu-ofụri China.
Ọ bụ iso nkwa magburu onwe ahịa ọrụ na-ana achi achi na ma tupu na post-ire ọrụ na-akụziri ga-nyere inyere gị aka ịmata na-eji anyị na ngwaahịa ndị ọzọ ngwa ngwa na juputara.
Dị na Qingdao, Jikọọ si ahịa otu na factory tụkwasịkwa ihe integrated management usoro na-enye ihe niile na-gburugburu ozi ahịa, si tupu ire na post-ire ọrụ. The enyemaka ụlọ ọrụ, Qing Dao iso Steel Structure Co., Ltd, awade-atụgharị-isi ọrụ n'ihi Steel Ọdịdị n'ichepụta maka ulo oru eji, agri-uru ụlọ, na Nga chepụtara ụlọ maka oji ala. The pụtara ìhè injinia, emi odude anyị Shanghai headquarter ọrụ, jikwaa Ụgha omumuihe na-enye n'aka-isi ọrụ anyị ahịa.
Steel Structure Building maka omumuihe
Steel Prefab Chicken House Na okuko Farm
Qingdao Jikọọ Steel Structure Co., Ltd.
TEC Mkparita: The Latest Na okuko Technolo ...
"Okuko Industry nwere ike ịmepụta 30,000 ...
© Copyright - 2010-2019: All Rights echekwabara. Products Guide - Featured Products - Hot Tags - Sitemap.xml - AMP Mobile